Sandals Royal Bahamian: fanavaozana bebe kokoa ho an'ny fialantsasatra mahafinaritra
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Sandals Royal Bahamian: fanavaozana bebe kokoa ho an'ny fialantsasatra mahafinaritra
Vaovao Mafana • Karaiba • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao lafo vidy • Vaovao • Resorts • Tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao isan-karazany
Sandals Resorts International (SRI) dia nanambara androany ny fanitarana ny fanavaozana efa an-tapitrisany dolara an'i Sandals Royal Bahamian, hotely fandraisam-bahiny, spa ary nosy tsy miankina any Nassau, Bahamas, miaraka amin'ny fikasana hanokatra ny 27 Janoary 2022.
Fonenana vaovao, nosy tsy miankina nohavaozina, ary maro hafa no kasaina hatao voalohany mandritra ny vanim-potoana 2022 ao amin'ny Sandals Royal Bahamian.
Efa eo an-dàlam-pandrosoana ny fivelarana ny suite suites sy ny fanavaozana ny efitrano sy efitrano 200 mahery.
Vao naseho ny foto-kevitra vaovao iray vaovao, Coconut Grove, faritra malalaky ny efitrano fandraisam-bahiny izay manitatra ny faritry ny morontsiraka mankany afovoan'ilay toeram-pialantsasatra.
Ho fanampin'ny efa namboarina sahady suite suites sy fanavaozana efitrano sy efitrano 200 mahery, Sandals Royal Bahamian dia hamoaka hevitra vaovao vaovao, Ahitra voanio, faritra fandraisam-bahiny mivelatra izay manitatra ny faritry ny morontsiraka mankany afovoan'ilay toeram-pialantsasatra. Voalokaloky ny felatanana voanio, ilay toerana vaovao dia hanasongadina ny fifandraisana eo akaiky eo amin'ny toeram-pivarotan'i Karaiba fialantsasatra miaraka amin'ny kamiao mitondra gourmet, chic, seza miala sasatra ary fahitana tsy manam-paharoa amin'ny ranomasina. Ny reimagination an'ny nosy tsy miankina fanta-daza, Sandals Cay, miaraka amina toerana fandraisam-bahiny nohavaozina sy traikefa gastronomika vaovao, dia hameno ny fanavaozana farany ny toeram-pivarotana. Mba tsy hanelingelina ny zavatra niainan'ny vahiny dia hikatona ny trano fandraisam-bahiny raha mbola eo am-pananganana ny trano ary hisokatra amin'ny vanim-potoana 2022.
“Famindrana ny daty fanokafana amin'ny 4 Novambrath fanapahan-kevitra sarotra tokoa ”, hoy ny filohan'ny Executive SRI, Adam Stewart. “Na dia azonay atao aza ny mamoha ny ankamaroan'ny toerana fialantsasatra, ny fangatahana erak'izao tontolo izao ny entam-barotra sy ny fikorontanan'ny rojom-panolanana dia mampihemotra ny fahafahantsika mamita ny tetik'asa feno ao amin'ilay tetikasa. Ny fitazonana ity hotely ity ao anaty fonosana mandra-pahatonga azy ho vonona tanteraka no zavatra tsara tokony hatao. Ao anatin'ny tontolo iandrasana fatratra izahay ary rehefa tonga ny vahininay dia ho toerana tony sy milamina i Karaiba izay azo antoka fa mendrika ny fiandrasana. ”
Ny vahiny manana famandrihana ao amin'ny Sandals Royal Bahamian mandritra ny fanidiana azy dia hoentina amin'ny toerana misy ny Sandals Resorts izay safidiny ao anatin'izany ny Sandals Emerald Bay ao Great Exuma ho an'ireo vahiny maniry ny hitazona ny famandrihany ao Bahamas. Sandals Resorts dia handray ny saram-panovana zotram-piaramanidina rehetra.
Sandals® Resorts dia manolotra olona roa am-pitiavana ny tantaram-pitiavana feno fitiavana, Luxury Included® any Karaiba. Miaraka amina toerana amoron-dranomasina 15 mahavariana ao Jamaika, Antigua, Saint Lucia, Ny Bahamas, Barbados, Grenada, ary 16th toerana tonga any Curacao lohataona 2022, Sandals Resorts dia manolotra fampidirana kalitao betsaka kokoa noho ny orinasan-tseranana rehetra eto ambonin'ny planeta. Signature Love Nest Butler Suites® ho an'ny tsiambaratelo sy serivisy; mpivaro-kena nampiofanin'ny Guild of Butlers English Professional; ny Red Lane Spa®; Misakafo 5-Star Global Gourmet ™, miantoka alika toaka ambony, divay misy vidiny ary trano fisakafoanana manokana ho an'ny gourmet; Aqua Centres miaraka amin'ny fanamarinana sy fampiofanana PADI® manam-pahaizana; Wi-Fi haingana avy amin'ny morontsiraka ka hatramin'ny efitra fatorianao ary ny Sandals Customizable Weddings dia sandan Resorts rehetra fotsiny. Sandals Resorts dia manome toky ny fandriam-pahalemana ho an'ny vahiny manomboka amin'ny fahatongavany sy ny fiaingany miaraka amin'ny Sandal Platinum Protocols ny fahadiovana, ny fepetra fanatsarana sy fahasalamana natokana ho an'ny orinasa namboarina mba hanomezana fahatokisana lehibe an'ireo vahiny rehefa miala sasatra any Karaiba. Sandals Resorts dia ao anatin'ny fananan'ny fianakaviana Sandals Resorts International (SRI), natsangan'i Gordon "Butch" Stewart, nodimandry, izay misy ny Beaches Resorts ary orinasa mpampiantrano rehetra ao Karaiba. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fahasamihafana Sandals Resorts Luxury Included® dia tsidiho www.fifanent.com.
Vaovao misimisy momba ny Sandals